August 7, 2020 - Bahuthutagabar
“ဆွမ်းလောင်းခြင်းကြောင့် ရရှိမည့် အကျိုး (၁၂) ပါး”
August 7, 2020 Bahuthutagabar 0
“ဆွမ်းလောင်းခြင်းကြောင့် ရရှိမည့် အကျိုး (၁၂) ပါး” ခဏအချိန်လေး ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ ဖတ်ကြည့်လို အသိတိုးပြီး ဆွမ်းလောင်းလှူပါ မိတ်ဆွေ့များ ဆွမ်းလောင်းရခြင်း အကျိုး (၁၂)ပါး ၁။ တာဝတိံသာနတ်ပြည် တစ်ထောင်သော နတ်မင်းတို့၏ မိဖုရား အဖြစ်ကိုရခြင်း။ ၂။ တစ်ထောင်သော စကြာမင်းတို့၏ […]
မင်းကတစ်နှစ်ပိတ်တော့ဘာဖြစ်လည်းအခုရောဘာလုပ်နေကြရလို့လည်း နို့ဖော်နေတဲ့ကောင်မတွေကြတော့ နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု့နဲ့ကိုက်ညီပီးဆင်ဆာလွတ်တယ်ပေါ့ ရီရတယ်မင်းကလူကြမ်းသရုပ်ဆောင်တွေကိုငါတို့ကိုယ်စားထမင်းကြွေးနေတဲ့ညီလေးပါ ကျေးဇူးရှိတယ် မင်းကိုတစ်နှစ်ပိတ်မဲ့အစားငါကိုတစ်သက်စားပိတ်ပေးပီလည်းလို့ရရင်လည်းချင်တယ် မင်းကိုငါလေးစားတယ် လိုရာဆွဲတွေးပီးပြောချင်တာ ပြောတဲ့ကောင်တွေကိုပါစပ်နဲ့ပြောလို့ရရင်ပြောချင်တယ် ဖိအားဆိုတာခံနိုင်ရည်ရှိသလောက်ပဲကောင်းတယ် စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့ကိုယ်ထ္မင်းကိုရှာစားနေရတာ မင်းမှာချစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ် မျက်ချေပေးနေလို့မမြင်ကြတာပါဟု ယုန်လေး၏ post အောက်မှာ comment ရေးပြီးအားပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် Credit ——————– မငျးကတဈနှဈပိတျတော့ဘာဖွဈလညျးအခုရောဘာလုပျနကွေရလို့လညျး နို့ဖျောနတေဲ့ကောငျမတှကွေတော့ နိုငျငံယဉျကြေးမှု့နဲ့ကိုကျညီပီးဆငျဆာလှတျတယျပေါ့ ရီရတယျမငျးကလူကွမျးသရုပျဆောငျတှကေိုငါတို့ကိုယျစားထမငျးကွှေးနတေဲ့ညီလေးပါ ကြေးဇူးရှိတယျ […]
သာပေါငျးညာစား တိုငျရှနျကို ရှံတယျဆိုပွီး သူ့စပှနျဆာမမကွီးကို ဖျောကောငျလုပျလိုကျပွနျပွီ
အခုတဈခါ ဟနျငွိမျးဦးကနေ တိုငျရှနျနဲ့ စပှနျဆာမမကွီးအကွောငျး ဖျောကောငျလုပျလိုကျပွနျပါတယျ။ ယုနျလေးကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး တိုငျရှနျအကောငျ့ကနေ ပွငျးပွငျးထနျထနျဝဖေနျတဲ့ ပို့တှတေငျခဲ့ပါတယျ။ အရငျကအလုပျအတူလုပျကွတဲ့လူခငျြး ပွငျးပွငျထနျထနျဝဖေနျတိုကျခိုကျနလေို့ ပရိတျသတျအခြို့က ထောကျပွရာမှာ အဆိုပါပရိတျသတျမြားနဲ့ အားမပေးခငျြနဆေိုပွီး ပွဿနာတကျလိုကျပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဟနျငွိမျးဦးက တိုငျရှနျကို သာယာပေါငျးတဲ့ သာပေါငျးဆိုပွီး ချေါဝျေါသမုတျလိုကျတာဘဲဖွဈပါတယျ။ အစကတော့မတငျတော့ပါဘူးလလေို့တှေးထားတာ ဒငျးကစပှနျဆာ […]
စုံတှဲပုံရိုကျတိုငျးသာ ယောကျြားရကွေးဆို လမငျးကဗြာမှာ ယောကျြားတှေ အမြားကွီးဖွဈနမှောပေါ့
စုံတွဲပုံရိုက်တိုင်းသာ ယောက်ျားရကြေးဆို လမင်းကဗျာမှာ ယောက်ျားတွေ အများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ လမင်းကဗျာအကြောင်းကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် သက်သေ သာဓကနဲ့ တိတိကျကျတင်ပေးပါ။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ပြီးထွက်ပြေးတာလည်းတင်ပေးပါ။ HD ရှိရင်လည်းတင်ပေးဖို့ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ လမင်းကဗျာ လမင်းကဗ်ာအေကြာင်းကိုတင္မယ္ဆိုလို့ရွိရင် သက်သေ သာဓကနဲ့ တိတိက်က်တင်ပေးပါ။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ျပန်ပြီးထြက်ျေပးတာလည်းတင်ပေးပါ။ HD ရွိရင္လည်းတင်ပေးဖို့ဒဲ့ျေပာလိုက္တဲ့ လမင်းကဗ်ာ ရုပ်သံကိုအောက်တွင်တင်ပေးထားပါတယ် #LaMinKabyar #MyanmarActress #CG […]
“ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေသူများ အတွက် လက်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်း”
“ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေသူများ အတွက် လက်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်း” ခေါင်းသိပ်ကိုက်လျင် (ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေသူများ အတွက် လက်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်း) နည်းလေးက အမှန်လွယ်သလို တကယ်ပဲ ထိရောက်ပါသည်။ ထူးထူးထွေထွေ လုပ်စရာလည်း မလိုပါ။ လူတိုင်း လက်တွေ့ စမ်းကြည့်နိုင်တဲ့ နည်းပါ … ။ ခေါင်းတစ်ခြမ်း […]
ဒီပို့လေးကို ယူထားလိုကြ သငြ့ခစွသြူ သငြ့ဇနီး သငြ့ခငပြှနြး ဘယတြော့မှ မဖောကပြှနရြဲတော့ဘူး…
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သူကို ပစ်ထားပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုလှအောင်နေပါ.. ဒီစာစောင်လေးကို ယောကျာ်း မိန်းမ မည်သူမဆို ဖတ်ပေးပါအထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်သည် မိန်းမ များအား အကြံပေးစာအရ ရေးသားထားပါတယ် ။ စာရှည်ရင် သည်းခံပြီး ဆုံးအောင်သာ ဖတ်ပေးဖို့ စာရေးပြုစုသူ သိန်းမောင်မောင် မှ အကြံပြု မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ… ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ […]
“လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာ ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှု (၄)မျိုး”
“လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာ ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှု (၄)မျိုး” ပျော်ရွှင်မှုကို ငွေနဲ့ဝယ်လို့ မရဘူးဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကို လူတိုင်း ကြားဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒါဟာ အလွန်မှန်ကန်တဲ့ စကားလေးဖြစ်ပြီး ငွေရှိပေမယ့်လည်း အတ္တတွေ၊ မာနတွေ ဖုံးလွှမ်းပြီး စိတ်ကောင်းမရှိရင်၊ ဘဝမှာ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူ၊ ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူတွေ မရှိရင်၊ နွေးထွေးမှု […]
ကိုယုန်လေး Live လွှင့်ပွဲကြမ်းပြီ (ရုပ်သံ)
ဒီနေ့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ ယုန်လေးကို အနုပညာလုပ်ခွင့် တစ်နှစ်အနားခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် အစ်ကို့ ကို တောက်လျောက် အစ်ကိုအရင်းလို ဆက်ဆံတယ် . အကုန်လုံး သိချင်တာတွေ ပြောပြတယ်. ကျွန်တော့် ဦးနောက် ချက်ချင်း တစ်ရက်နီးပါး အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး တိုင်ပင်တယ် .တောင်းပန်သင့်တယ်ပြောတယ် . တောင်းပန်တယ် ဖြုတ်ချသင့်တယ် […]
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ယုန်လေးအား အပြစ်ပေးလိုက်ပါပြီ
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ယုန်လေးအား အပြစ်ပေးလိုက်ပါပြီ အဆိုတော် ယုန်လေး ကို အနုပညာ လှုပ်ရှားခွင့် (၁) နှစ် ပိတ်သိမ်း! COVID-19 ကာလ အတွင်းမှာ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးမှုတွေ မပြုလုပ်ရဘူးလို့ ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား ဝန်ကြီး ဌာန က အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း […]
“တစ်ရက်ကို ငှက်ပျောသီး (၃)လုံး စားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိူးကျေးဇူးများ…”
“တစ်ရက်ကို ငှက်ပျောသီး (၃)လုံး စားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိူးကျေးဇူးများ…” ယနေ့မှာတော့ တစ်ရက်ကို ငှက်ပျောသီး၃လုံး စားပေးခြင်း ဖြင့်ရရှိမည့် အကျိူးကျေးဇူးလေး ရေးပေးပါရစေနော်… (၁) အသက် ၄၀ကျော်လာသည်နှင့် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ လျော့လာပြီး အရိုးအဆစ် နာကျင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက် နေ့ ည ငှက်ပျော်သီးမှည့် […]